🎉 YTV Channel ပရိသတ်တွေထဲမှာ စုံထောက်ပညာဝါသနာပါသူတွေများ ရှိကြပါသလား?… 🎉 🕵‍♂ တကယ်လို့များ စုံထောက်ပညာဝါသနာပါတယ်. မှုခင်းတစ်ခုမှာ တရားခံဘယ်သူလဲဆိုတာကို စူးစမ်းကြည့်ချင်မိတယ် ဆိုတဲ့ ပရိသတ်တွေအတွက်တော့ Who’s the murderer Variety […]
The Versace Ep-2
📚 The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story 📚 💃 ကမ္ဘာ့ဖက်ရှင်လောကကြီးရဲ့ Gianni Versace ကြီးရဲ့အောင်မြင်မှုတွေကြောင့် မသမာသူလူတစ်စုရဲ့လုပ်ကြံခြင်းကိုခံလိုက်ရတဲ့အခါမှာတော့ … […]
🎸 သီချင်းတွေနဲ့ ခံစားချက်တွေကို ဖြေဖျောက်ချင်သူတိုင်းအတွက် Y Music 🎸 🎼 YTV Channel ရဲ့ “Y Music” အစီအစဉ်ကတော့ ပရိသတ်တွေ အကြိုက်ဆုံး သီချင်းတွေကို မှ ထုတ်နှုတ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ […]
ထူးခြားတဲ့တရုတ်ရိုးရာအစားအသောက်များ ရှာဖွေခြင်း (အပိုင်း ၉) 🙆‍♂️ တရုတ်လူမျိုးတွေရဲ့ရိုးရာစားသောက်နေထိုင်မှုပုံစံတွေကို တင်ဆက်ပေးမယ့် YTV Channel ရဲ့ A Bite of China အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်… 🧈 A Bite of China […]
⌨ နှလုံးသားကစားပွဲ အပိုင်း (၁၂) ⌨ 🤷‍♂️ “ဟောရာ မင်းဘယ်လိုစဉ်းစားထားလဲ အသင်းခေါင်းဆောင်ခန့်အပ်ဖို့ကိစ္စ” 😏 “ကောဖန်းရဲ့အတင်းအကြပ်ပြောဆိုမှုကြောင့်သာမဟုတ်ရင် သူခေါင်းဆောင်ဖြစ်မလာဘူး…” 👀 မန်နေဂျာကျောက်တစ်ယောက် စိတ်ပျော့တဲ့ဟောရာကိုအသုံးချပြီး ရှောင်ကောကိုဘယ်လိုအကောက်ကြံဦးမလဲ …. […]
🦁 တောဘုရင်ခြင်္သေ့တို့ရဲ့ ရဲစွမ်းသတ္တိတွေကို ခံစားကြည့်ရှုရမယ့် The Lion Guard အပိုင်း(၅၃) 🦁 👥 အနှစ်သာရပြည့်ဝပြီး အသိဉာဏ်တိုးပွားစေလို့ ကလေးရော လူကြီးပါ ကြိုက်နှစ်သက်ရတဲ့ ကာတွန်းကားကောင်းလေး “The […]
Daily Show (83)